China Suspension na sterịn Knuchles Parts-Z5020 emepụta na suppliers | TANGRUI
Akụkụ nke Steering Knuckle Mgbakọ
Njikwa mkpịsị aka jikọọ sterịn na nkwusioru mmiri. Dị ka ndị dị otú a, ha nwere ngalaba iji tinye akụkụ na mgbakọ nke usoro nkwusioru na nduzi. Uzo ahụ, kwa. Isi stetị mkpịsị aka akụkụ gụnyere
Arịọnụ elu maka bọl biarin ma ọ bụ oghere oghere
Arịọnụ maka elu akara ogwe aka na etiti nkwusioru na strut maka MacPherson nkwusioru ụdị
Arịọnụ maka tie mkpanaka ma ọ bụ n'iru ogwe aka
Arịọnụ maka nkwonkwo bọl ma ọ bụ obere njikwa aka
Ihe iji tinye calipers breeki
Usoro nhazi nke dị n'elu gosipụtara akụkụ ndị a. Rịba ama na akụrụngwa ahụ nwere ike ịbụ nha na ụdị dị iche iche. Versiondị n'ụgbọ ala gị nwere ike ịdị iche na nke ahụ na eserese ahụ. Nhazi usoro niile ka dị otu, agbanyeghị, dabere n'ụdị njiko mkpịsị aka.
A na-enyocha mkpịsị aka a na-atụzi nke ọma na nke a na-anwale nke ọma iji nye ngbanwe a tụkwasịrị obi na ụgbọ ala mbụ.
Ntughari uzo - a na-eme nkpuchi mkpịsị aka a iji dochie mkpịsị aka mbụ na ugbo ala
Pụrụ ịdabere na ya - nkenke rụọ ọrụ iji kwekọọ nha nke ihe izizi
A pụrụ ịtụkwasị obi na-ewu ụlọ - arụpụtara ya n'ụzọ siri ike site na iji ihe siri ike
Nnwale siri ike - njikwa njikwa njikwa zuru oke na-adị ogologo ndụ
Kedu ihe bụ njiri mara mma dị mma?
Mgbe ịzụrụ ntụgharị ihu ntụgharị gị, ịchọrọ ogo kacha mma. Ọzọkwa, nke dabara n'ụdị ụgbọ gị na ụdị. Tụlee ihe ndị a.
Ọ bụrụ na ibu abụghị esemokwu, mkpịsị mkpịsị aka kwesịrị ime. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike irite uru site na ịdị arọ nke aluminom. Gbọ ala kọmpat na-achọkarị ihe dị mfe, ebe ike iguzogide mmebi bụ ihe na-achọsi ike maka ụgbọ ala dị arọ.
A na-ewu mkpịsị aka na-achịkwa ụgbọelu ka ọ daba n'ụgbọ ala ụfọdụ. Ya mere, ị ga-ahọrọ naanị ihe ga-adabara ihe ụgbọ gị chọrọ. Ndị na-ere ahịa akụkụ akpaaka nwere ike inyere gị aka ịhọrọ nke ziri ezi. Mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị, nwee ozi ụgbọ ala gị iji chọọ mkpịsị aka siri ike.
Knfọdụ nkwonkwo mkpịsị aka siri ike ịwụnye ebe ndị ọzọ nwere ike ịkwado dị ka ọrụ N'onwe Gị. Typesdị ndị dị mfe iji wụnye gụnyere ndị gbakọtara. Ọ bụrụ na ị na-atụle ịmegharị njigide mkpịsị aka gị n'onwe gị, họrọ ụdị nke kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ na ịkwọ ụgbọala n'ọnọdụ tara akpụ, ị ga-erite uru na mkpịsị aka nke ọma. Akụrụngwa nwere ike ịnwụ dị iche iche, nke dịkwa iche na ndị nrụpụta dị iche iche. Ihe ziri ezi maka ọnọdụ gị dị mkpa iji nye nchebe corrosion.
Nke gara aga: Ntuziaka Ntanetị Maka Volkswagen Beetle -Z2490
Osote: Oem 42200-SR3-A02 na 42200-SR3-A52 Wheel Hubs-Z8040
Hot Ree High Quality Wheel Hub-Z8055
Professional Factory rụpụta gbara Peening L ...
High Quality N'azụ Wheel Hub N'ihi Suzuki-Z8047
High Quality Auto Parts Ball Joint N'ihi NISSAN-Z ...
N'iru n'iru Knuckle, Shock Absorber Rubber, Ogige Ulo, Hood Shock Absorber, Taya Ball Joint, Shock Absorber kpọchie,